DIINQA OROMOO 3ffaa- Saphaloo Kediriifi Beekan Gulummaa – Beekan Guluma Erena
DIINQA OROMOO 3ffaa- Saphaloo Kediriifi Beekan Gulummaa	Beekan Erena
Audio/Video/Image Category, Language Category December 21, 2016Oromo Revolution
101SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
As tuqaa dhaggeeffadha!
DIINQA OROMOO 3ffaa- Saphaloo Kediriifi Beekan Gulummaa
1. Saphaloo Kadiir eenyu?..Eessatti dhalate? Maal hojjetaa ture? Amma hoo maalirra jira? 2. Saphaloon gama hog-barruu kana akkamitti seente? Yoom gama hog-barruu kana gale? Gama aartiifi afaan Oromootiin hojiin ati hojjatu gosa kam irratti xiyyeeffata? Maaliif gama hog-barruu kanatti xiyyeeffachuu filatte? 3. Ogummaan ati baratteefi hojiin hojjachaa jirtu adda. Ogummaa qonna akka baratte dhageenya. Hojiin ati baayyee hojjattu immoo aartiifi hog-barruu irratti xiyyeeffata. Kun akkamitti tahuu danda’a? Waa’ee aartiifi hog-barruu kana waan leenjii fudhatte qabda moo akkami waa’een saa? 4. Kitaaboota hog-barruu garagaraa barreessitee akka harkaa qabdu dubbatama. Mee kitaaboonni kee kun maal maal irratti barreessite? Waliigalatti Kitaaboota meeqa barreessitee harkaa qabda yeroo ammaa? 5. Hojiin kee kun marti immoo tokkolleen maxxanfamee gabaarraa oolee bifa kitaabaan ummata bal’aa bira hin geenye. Mee sababni guddaan hojiilee kee kana akka maxxanfamee ija ummataa guutuu bira hin geenye hanqise maali? Haala kamiin ummataan gahuun danda’ama jettee yaadda?
6. Ati miidiyaa hawaasaa kan akka ‘Facebook’ irratti waan baayyee barreessita. Barruulee kee gama facebookiifi marsariitii (website) dhiheessituun hordofta miidayaa hawaasaa hedduu birattiis ni beekkamta. Mee dura waa’ee bu’aa fayyadama miidiyaa hawaasaa kana irraa waan jettu yoo qabaatte tokkoof lama jedhii gama marii itti aanuutti dabarra.
7. Barruulee gama fuula facebookiifi marsariitii (website) dhiheessitu dhiheenya booda kana gama xinxala siyaasaa irratti fuulleefata. Xinxalli ati dhiheessitu immoo yeroo garagaraa yoo mirkanaa’u mul’ata. Kana yoo ilaalaan immoo “Saphaloon ammaas gara siyaasaa kana seenuuf jedha moo?” nama jechisiisuun hin oolu. Mee akkami waa’een saa? Kanarratti waan jettu yoo qabaatte?
8. Amma mee gama aartii fi afaanii kana deebinee guddina aartiifi afaan Oromoo hariiroo biyya keeniyaa waliin ilaalla. Biyya keeniyaa keessa sabni Oromoo lammii biyyattii tahanii jiraatan kan akka Booranaafi Ormaa ni jiru. Gosti Oromoo lammii keeniyaa tahan kun haallii gudina Aadaa, Hog-barruu, Afaaniifi aartii isaanii biyya keeniyaa keessatti maal fakkaata? Dhimma guddina aartiifi afaan Oromoo Keeniyaa kana ilaalchisee qabatama jiru irra dhaabbattee yoo ilaaltu akkamitti ibsita? 9. Xumura irratti dhaamsa addaa gurra ummataa gahuu qaba jettee yaaddu kan marii keenya kana keessatti hin tuqamin yoo jiraate akka dabarfattu carraan siin kenna. Dhaamsa kee ummataan Oromoon gahii nutiis walitti dhaammanna.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa101SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← DR-Gizaachoo Teessoo haala Master Pilaanii amma keessa jirrurratti dubbatan
DIINQA OROMOO KUTAA 4FFAA-Dr. Gizaachoo Teessoofi Beekan Gulummaa →